नर्सिङ पेसा रोजेकोमा पछुतो छैन – Health Post Nepal
२०७७ असोज १५ गते | Thursday, 01 Oct, 2020
नर्सिङ पेसा रोजेकोमा पछुतो छैन
२०७५ मंसिर ७ गते १४:३९
मेरो जन्म मनाङको जानकीमा भएको हो । मनाङबाटै एसएलसीसम्मको अध्ययन पूरा गरेपश्चात् उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आएँ । मनाङ विकट तथा पिछडिएको जिल्ला भएकाले स्कुल तहको अध्ययनपछि त्यहाँका प्रायः युवा विदेश जाने गर्छन् । तसर्थ, मनाङमा उच्च शिक्षा आर्जन गरेका व्यक्ति विरलै भेटिने, मलाई नर्सिङ विषय अध्ययनका लागि प्रेरणा दिने खासै कोही थिएनन् । डाक्टर, नर्सहरूले देशका विभिन्न विकट ठाउँमा समेत गएर सेवा दिएको सुनेकाले नै नर्सिङ विषय अध्ययनमा रुचि जाग्यो । मनाङको दुर्गम भूगोल, त्यहाँका जनताको नाजुक चेतनास्तर, शिक्षा र स्वास्थ्यमाथिको नगण्य पहुँच, कमजोर आर्थिक अवस्था, यिनै विषय नै नर्सिङ अध्ययनका लागि मेरा प्रेरणाका स्रोत बने ।
नर्सिङ पढेपछि गाउँमै गएर आर्थिक रूपले पिछडिएका मानिसको सेवा गर्छु भन्ने लागेको थियो । म दुर्गम क्षेत्रमा जन्मेकी, बढेकी, पढेकी भएर होला, नर्सिङका पनि विभिन्न स्तर वा तह हुन्छन् भन्ने कत्ति पनि ज्ञान भएन मलाई त्यतिवेला । त्यसैले २ वर्षे नर्सिङ कोर्ष (एनएम) गरेँ, जुन प्लस टुसरह हो । मैले सिटिइभिटीअन्तर्गतको उक्त कोर्ष बनेपामा बसेर अध्ययन गरेकी हुँ ।
त्यतिवेला उक्त विषय अध्ययनका लागि दुर्गम क्षेत्रका मानिसका लागि विभिन्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था भए पनि मलाई त्यसबारे कुनै जानकारी नभएकाले भने छात्रवृत्तिमा पढ्न पाइनँ । हाम्रो ‘वोजिटी’ अर्थात् ‘अन द जब टे«निङ’ भन्ने हुन्छ, जसमा ३ महिनाको तालिम हुन्छ । त्यसकै लागि म काठमाडौं मोडल अस्पतालमा आएको थिएँ । तालिमका क्रममा मैले अस्पतालमा बिरामीलाई गरेको हेरचाहबाट सिनियर म्यामहरू सन्तुष्ट हुनुभयो र मलाई यहीँ नै रोजगारी दिनुभयो । मैले सन् २००९ देखि मोडल अस्पतालमा काम गर्न सुरु गरेँ ।
मैले नर्सिङको पढाइ ०६३ देखि सुरु गरेकी थिएँ । अध्ययन सकिएलगत्तै मोडल अस्पतालमा काम सुरु गरेपछि मेरो गाउँमा गएर दुःखी–गरिबको सेवा गर्ने सपना अधुरै रह्यो । अहिले पनि वेलाबखल गाउँमा रहनुहुने मेरा आफन्तले तिमीले गाउँमा आएर दुःखी–गरिबको सेवा गर्नुपर्छ भनेर घचघच्याइरहनुभएको छ । सबै परिवार काठमाडौंमै बस्ने भएकाले पनि मलाई गाउँ जाने उपयुक्त वातारण मिलेको छैन ।
बिरामीलाई उपयुक्त तरिकाले हेरचाह गर्न सक्नु तथा उनीहरूलाई बुझाउन सक्नुमा नै नर्सिङ पेसाको सफलता जोडिएको छ । आफूले गरेको हेरचाहबाट बिरामी खुसी तथा सन्तुष्ट भएमा मलाई मात्र नभई सम्पूर्ण नर्सलाई औधी नै खुसी लाग्छ । सानैदेखि भित्री मनले अठोट गरेर नर्सिङ पढेकाले होला, २४ घण्टै ड्युटीमा रहँदा पनि मलाई कुनै पनि समय नर्सिङ पढेकोमा पछुतो भने लागेन । जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरे पनि सफल बन्नका लागि मानिसले संघर्ष त गर्नैपर्छ ।
कुनैवेला परिवारलाई समय दिन पाइनँ भन्ने लागे पनि पेसाप्रति पछुतो भने कहिल्यै लागेको छैन । नर्स बनेकोमा म पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छु । मैले पेसागत रूपमा परिवारबाट पूर्ण समर्थन पाएकी छु । मेरा श्रीमान् तथा परिवारले मलाई थप अध्ययनका लागि प्रेरणासमेत दिइरहनुभएको छ । मैले जतिसक्दो छिटो माथिल्लो अध्ययनमा लाग्ने सोच बनाएकी छु । बच्चा सानो भएका कारण अध्ययन अगाडि बढाउन पाएकी थिइनँ ।
जीवनमा धेरै संघर्ष गरेकी छु । घरमा बच्चा रोइरहेको हुन्छ, उता अस्पतालमा ड्युटी आवर सुरु भइसकेको हुन्छ । त्यतिवेला मन धेरै नै आत्तिन्छ । बच्चाको राम्रो हेरचाह गर्न नपाउँदा मनमा एकदमै फ्रस्टेसन आउँछ । विवाह नगर्दा तथा गरेपछि पनि बच्चा नहुँदासम्म पेसाप्रति कहिल्यै पछुतो भएन । तर, बच्चा भएपश्चात् पेसाकै कारण बच्चाको हेरचाह राम्रोसँग गर्न नपाउँदा भने अलिकति खल्लो अनुभव हुँदोरहेछ ।
(लामा काठमाडौं मोडल अस्पतालमा नर्सका रूपमा कार्यरत छिन्)
डा. सापकोटाको निधनले चिकित्सा क्षेत्रमा अपूरणीय क्षतिः चिकित्सक संघ
भक्तपुरको डा. इवामुरा अस्पतालले जिउँदै मानिसलाई मृत घोषणा गरेपछि…